के आफ्नै बहिनीसँग नांगै सुत्थे महात्मा गान्धी ? यस्तो रहेछ रहस्य ! « News24 : Premium News Channel
के आफ्नै बहिनीसँग नांगै सुत्थे महात्मा गान्धी ? यस्तो रहेछ रहस्य !
एजेन्सी । सारा भारत वर्षले ‘बापू’ भनेर पूजा गरेका महात्मा गान्धी के पुजिनलायक थिए त ? आउनुहोस् थाहा पाउनुहोस् अहिंसाको आन्दोलन चलाएर विशाल बेलायतको उपनिवेशलाई भारतबाट खेदाउने श्रेय पाएका गान्धीको वास्तविकताः
गान्धीले भारतका विभिन्न शहरमा त्यस्ता आश्रमहरु निर्माण गरे जहाँ उनी हरेक रात ३ वा ४ जना कुमारीसँग नांगै सुत्ने गर्थे । त्यसताका यो खवर भारतभर सनसनी भएर फैलियो, हल्ला फैलाउनेमा गान्धीका स्वकीय सचिव निर्मल बोस थिए ।
जब यो खवर पण्डित जवाहरलाल नेहरुसम्म पुग्यो, उनले गान्धीलाई यस्तो कार्य अधर्म हुने सल्लाह दिएका थिए । तर त्यसबेला गान्धीले आफू सहोदर बहिनीलगायत अरु किशारीहरुसँग केवल आफ्नो ब्रम्हचार्यको परीक्षण गर्नका लागि मात्र निर्वस्त्र सुतेको र कुनै अनैतिक कार्य नभएको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।
उनको आश्रममा एकै साथ लक्का जवान युवाहरुलाई नांगै भएर नुहाउन र सँगै सुत्न आदेश दिइन्थ्यो । आश्रममा पतिपत्नीलाई एकैसाथ सुत्न बर्जित गरिएको थियो र यदि कसैलाई कामोत्तेजना आइहालेमा अत्यन्त चिसोपानीमा चोबल्ने गरिन्थ्यो । (एजेन्सीको सहयोगमा)